Umhla My Pet » Ngeendlela ezintlanu Fumana Umva ex yakho.
ukubuyekezwa: Oct. 14 2020 | 3 min ukufunda
Ngoko ubeko? Wamsa ukuba lula? Angababonisanga umdla ngokwaneleyo kwiimfuno zabo kunye neemfuno solwalamano lwakho? Ezilahlekileyo uthando ubomi bakho kwaye ufuna wambuyisela? Oku kuza kuba indlela nzima makakhwele inkoloseko yayo kodwa kubalulekile kakuhle oko. Emva kokuba yonke loo nto yonke ngemini enye idibana uthando yobomi babo okunene okufanayo iimvakalelo zabo. Uluhlu olude abantu besiya isantya-ukuthandana, etc … kwanele ukubonisa ukuba oko kwafunyanwa nale ndoda kunqabile. Kodwa ke niyazi ukuba zonke ukulungele kwaye uziva aziqondakali eyoyikekayo ngoku kuba awukwazi akazibambi ngeengalo zakho okanye bathethe nabo. Kodwa bonke asilahlekanga. Uyakwazi ubuncinane zama kunzima lwakho ukufumana kwakhona kwaye linokuba ukuba xa kukho uthando olomeleleyo khona apho kuya kuba khona kwicala labo kakhulu. Konke ekufuneka uyenze umbilo oko ngathi mhlawumbi uzama ukwenza wena uzame kunzima ukuba ubabonise Benza kanye oko kuthetha kuwe. Nazi nje ezinye zeendlela onokukwenza ukuba bendime gals!
1. Cacisa ukuba kutheni wawaphatha indlela Ngaba
Yena mhlawumbi bedidekile ukuba kutheni wathabatha Baxabiseni okanye babaphatha kakubi. Oku akuthethi ukuba kufuneka wenze ezinye ibali ezineenkcukacha malunga kutheni na. Oku kuthetha ukuba sinyaniseke. Kusenokwenzeka ukuba ubusemtsha, ukuba akazange aqonde ukuba izinto de loo nto, okanye naliphi na inani yezizathu. Akukho namnye ogqibeleleyo ukuba ndiyakuthanda ngokwenene baya ndiyanithanda kuba zonke izinto Ziyandisukela malunga nawe. Kodwa unxibelelwano kudla nomqobo ongundoqo kulwalamano. Kufuneka baqonde ukuba kutheni na ukuba benza ntoni na. Wena babenzele loo nto kwaye uya kuyixabisa ukunyaniseka yakho yokuba ube nesibindi uze uqole ngokwaneleyo ukuba uyakuvuma ukuba eziphosakeleyo.
2. Hlala In Qhagamshelana Nawo
Ngokucacileyo le unzima kuba abanokufuna ukuhlala ukuqhagamshelana nawe. Kwaye kufuneka ahloniphe ukuba. Kodwa nje ukuba ubone bathi hello kunye namagama ambalwa. Bonisa ukuba andifumananga libale. Mbonise ukuba uyakhathala na ukuba ufuna ukuchitha ixesha kunye nabo kodwa ukuba uyazihlonela ukuba ibhola enkundleni zabo ngoku.
3. Baxelele You Are Sorry
Kubonakala kunokuba elula kodwa idla ngokuba yeyona nto inzima ehlabathini umntu ukuba enze. Kwelinye icala kukho abantu abathi ke maninzi gqitha. Kufuneka ukuba kubekho ukulingana apha. Kuyafuneka ukuba ngokusuka entliziyweni. Kufuneka ubabonise ukuba ngokwenene bayazisola ngento oyenzileyo kubo. Kuba nza. Kwaye ufuna ukungqina kubo ukuba bazisole ukuba izinto ziya kwahluka ukuba ziniphindisele eli xesha. Oku ngeke nje kuba amazwi alambathayo. Baya kubona kuwe ngqo kude.
4. Bonisa ukuba uyitshintshile
Oku akuthethi njengomntu kuba ngokuqinisekileyo iya kuba akukho ngengqiqo kuloo. Ke nina njengomntu leyo yamenza kuwa eluthandweni nawe kwindawo yokuqala emva kokuba zonke. Oku kuthetha ukuba uyambonisa ukuba uyitshintshile kwezi nkalo emibi wawagxotha nina nobabini ngaphandle kwindawo yokuqala. Kufuneka ukubonisa ukuba uyakwazi ukubona apho uphazame ngoku ukuba ufundile kuyo.
5. Lwelani kuye
Enye yezona zinto uthando onokuyenza kunilwela umntu uyamthanda. Wena kulwa kuphela umntu omthandayo emva ngokuchaseneyo ungathanda okanye ezimbejembeje. Ke kuni uyawalwela, ababonisa ukuba zizinto zonke kuni ngoku uzingqina umthanda kangakanani kubo. Nyaniseka nabo. Uziva inxalenye enkulu yobomi bakho ilahlekile kwaye niyasokola ngokungathethekiyo. Yiba bazimisele ukubeka ngokwakho kumgca kwaye musa avumele ikratshi yakho ukufumana ngendlela. Akukho namnye ofuna kushiywa engasese likratshi babo ubuchule.